प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलाई कुन धुन मन पर्छ, म वजाउँछु, तपाई नाच्नुहोला – NepalayaNews.com
प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलाई कुन धुन मन पर्छ, म वजाउँछु, तपाई नाच्नुहोला
११ बैशाख २०७७, बिहीबार १०:४९
बिष्णु गौतम ।
कम्यूनिष्ट व्यवस्था र सासकको वारेमा वोल्ने अधिकार त मलाई नहोला र वोल्ने हैसिजयत पनि राख्दिन । किनभने म सँग कम्युनिष्ट शिद्धान्तको कण्ठस्थ ज्ञान नै छ । कम्युनिष्ट पण्डितहरुलाई यो मेरो विचार एक कप चिया वा एक पेग रक्सीको लागि सितन वन्न पनि सक्ला । त्यसो त महान कम्यूनिष्टको शिद्धान्तमा लेखिरहेका प्रोफेसर र लेखकहरुलाई एक खिली चुरोटका लागि गफ वन्नपनि सक्ला। तर लकडाउनमा दैनिक कोचिईरहदा मनमा चाहिदा नचाहिदा कुुरा सोचिरहदो रहेछ । त्यसैले एउटै कोठामा वस्दाको साथीभनेकै सामाजिक संजाल र टेलिभिजन हो । हिजो मात्रै भाईरल भएको एउटै शव्दले यो मनोभाव लेख्न प्ररित गरेको हो । गल्ती भए माफी पाउँ, किनभने मेरै भोटका आधारमा तपाँई प्रधानमन्त्री वन्नु भएको हो । र एउटा कुराको ग्यारेण्टी पनि गर्न चाहन्छु कि म सवै कम्यूनिष्ट तपाँई जस्ता भएछन् र औला किटिएछ भने पनि म अन्यत्र भोट राख्दिन ।
कर्कस धुन, यहि धुन हो जसले रक्सीले टिल्ल मातेपछि आँफु हुननसकेको महान संगीतकार वनाउन सानो दुधे वालक अष्ट्रेलियन नागरिक लुडविग वैन बीथावेनलाई उनको वावुुले जर्वजस्त संसारकै महान संगीतकार वन्न प्रेरित गरे । प्रत्येक दिन साँझ नपर्दै वालक बीथावेन निकै पीडामा हुुन्थे कि कतिवेला वावु आँउछन् र विना सुुर र तालमा वाजा वजाउन लगाउँछन् । उनकै शव्दमा भन्ने हो भने–“यी मेरा लागि संसारकै सवै भन्दा कर्कस र पीडादायी धुनहरु हुन् ।” यो कुरा जव उनि महान संगीतकारका रुपमा संसारमा प्रसिद्धी कमाए त्यस पछि उनले आफ्नो वायोपीकमा सार्वजनिक गरे । वर्तमान राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले केहि जनवोलीहरुलाई कर्कस धुनका रुपमा परिभाषित गरेका छन् ।
आज नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको ७१ औं जन्म जयन्ती हो । एक कम्यूनिष्ट भोटरका लागि यो उमंगको कुरा पनि हो । तर यहि दिवसको पुर्वसंध्यामा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले जनवोलीलाई कर्कस धुनको संज्ञा दिनुुलाई आफैले दिएको भोट र कम्युनिष्ट हुने प्राव्धानका वारेमा एक पटक सोच्न वाध्यपा¥यो । लकडाउनका कारण वाहिर निस्कन नपाउनुको पीडालाई केहि क्षण भएपनि मल्हम लगाउन उत्कृष्ट जोक पाएकोमा आफैलाई धन्य मानेको छु । जनताका पीडाका आवाजलाई कर्कस धुनमा परिवर्तन गर्ने सामथ्र्य संसारका कम्युनिष्ट त के उत्तर कोरियाका नेता तथा सरकार प्रमुख किमजोङ उनसँग पनि छैन ।
संसारभर फैलिएको कोभिड महामारीबाट वच्न घोषणा गरिएको लकडाउनले महिनादिन छोई सक्दा खान पाएनौ भन्दा अनि रोकथामका लागि ल्याईएका सामानमा कमिसन नखाउ जनताको ज्यानभन्दा ठुलो होईन तिमिहरुले खाने कमिसन भनेर आवाज उठाउदा तपाईलााई कर्कस लाग्यो ? ६८ औं हिउँदपार गरिसक्दा पनि तपाईलाई लागेको छैन र एक हिउँदले जाडो जादैन भनेर । कहाँ विर्सेको छु र तपाईको राष्ट्रवादको शंखध्वस । त्यसैको भ्रममा त अहिले दुुई तिहाई आएको । दुई बर्ष पछि त फेरि पनि चुनाव हुन्छ त्यति वेला वोल्ने कुुरा के होला है ?
रविन्द्रसँगै हरायो वाईडबडी खरिद काण्ड पनि। साथीभाई मिलेर गरेको यात्रामा वाटो काट्नका लागि गरिएको रमाईलो चुट्किला झै तपाईले नै सवैको सफाई दिनुभयो । सवै जना चोखिए, अन्यथा लाग्दैन भने ग्रामिण उखान जस्तै आँफै वोक्सी आफै झाक्रि ।
केहि समय अगाडी सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा तपाँईका प्रियपात्र वालकोट दरबारका सुसारे गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको काण्ड कहा पुुग्यो कुन्नी? कि पदवाट हट्दैमा त्यो ७० करोड पचिन्छ ? नत्रभने नियत नै खराव राखेर काम गर्नेलाई आफ्नो प्रियपात्र वनाउनुले तपाँईको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अर्को संसारकै उत्कृष्ठ जोक्स होईन र ? अनि तपाईका मन्त्रीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मु… भनेर सम्वोधन गर्दा कुनै कार्वाही भएन तर यहि लेखेकोमा मलाई कार्वाही हुनपनि सक्छ किनभने तपाँई त यो देशको न्यायधिस पनि त हो नि हैन र ?
गोकुल काण्ड लगत्तै अगाडी बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै वालुवाटारको आफै वसेको जग्गा तपाईकै अर्का प्रियपात्रले हत्याएको कुरा पनि । नेपाली उखान छ नि “मेरो कम्मरको खुकुरी कुन हुुस्सुुले चोर्यो भने झै । प्रधानमन्त्री सुत्ने पलङ्गमुनिको जग्गा अर्कैको नाममा हुँदापनि कानमा तेल हालेर वस्ने । अन्यथा नलागो प्रधानमन्त्री ज्यु यो देशमा तपाई भन्दा हुस्सु अर्को कोहि होला र ? यो विषयमा पनि जनता वोले तपाईलाई कर्कस नै लाग्यो । वरु भन्दिनुुस् न तपाईलाई प्रियलाग्ने सुमधुर धुन कुनहो म पनि वजाईदिउला , कम्तिमा तपाँई पोखरा आउँदा पनि नाच्नु होलानी? अनि के प्रधानमन्त्री ज्यू त्यो ३३ कीलो सुनकाण्डको मुख्य दोषी को हो भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेन है । सुन काण्डका क्रममा मारिएका तिनजनाको परिवारको रोधनपनि तपाईलाई कर्कस नै लागेको होलानी है । त्यसोत निर्मला हत्याकाण्ड र वर्तमान राष्ट्रपतिका श्रीमान जसको जगमा तपाई भित्ताहरुमै किननहोस् नयाँयूगको घोषणा गर्नु भयो उनको हत्यारा कहिले पत्तालाग्ला है । खासमा भन्ने हो भने म नेकपामा भोट हाल्ने भएकै मदन भण्डारी र मनमोहनको सिद्धान्त र जिवनयापन हेरेरनै हो ।
अहिले मैले यो कुुरा गरे भने त झन् ठुुलो कर्कस आवाज निस्कन्छ होला । एक पटक कान जचाउने हो कि प्रधानमन्त्री ज्यू जनताको आवाज कर्कस किनलागेको होला भनेएक भोटरका हिसावले र आमनागरिकका हिसावले मलाई राम्रै सँग थाहा छ तपाई भ्रष्टाचारमा लिप्तहरुलाई कार्वाही गर्नु हुन्छ तर पनिकानुन नै संशोधन गरी यती होल्डिङलाई सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिनुभयो । कानूनै संशोधन गरी यती समुहलाई राज्य कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिएको काण्डले मेरै दल नेकपा भित्रै खैलाबैला मच्चियो तर तपाँई टसको मस हुनुभएन। जनताले आबाज उठाए तपाईले उत्कृठ जोक्स हाल्नुभयो । हामी त्यहि जोक्सलाई आत्मसाथ गरेर वस्यौं ।प्रधानमन्त्री ज्यूू तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ , एक अरव रुपैयामा एक को पछाडी कतिवटा सुुन्य हुन्छन ? सायद तपाईले सोच्नु हुदैन किनभने तपाईले त आफ्नो सवै सम्पती आफ्नो शेष पछि राष्ट्रका नाममा दिनुभएको छ । त्यसैले तपाइको लागि तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा पाउने तलव र तपाईको श्रीमतीको ३३ वर्षको जागिरे कमाईनै प्रयाप्त हुन्छ । तपाँईको यो कमजोरीलाई तपाईका वरिपरी रहने चुण्ड र मुण्डहरुको झुण्डले राम्ररी बुुझेका छन् त्यसैले तपाईलाई मनपर्ने धुन वजाईदिए तपाई त्यसैमा नाच्दै मख्ख पर्नु भयो ।
अमेरिकामा मस्तिष्कलाई खाने सूक्ष्मजीव भेटियो, धाराको पानी प्रयोग नगर्न चेतावनी ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १०:४९
कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा ७० लाख संक्रमित ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १०:४९
सात सन्तानकी मातालाई सर्वोच्च अदालतमा लैजाने ट्रम्पको निर्णयले तातेको अमेरिकी राजनीति ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १०:४९